Xogo Ku Xidhiidhiyay Suldaan Maxamed Cabdi Qaadir In Uu Faraha Kula Jiro Hawlo Soomaali Weyn Loogu Ololaynayo | FooreNews
Home wararka Xogo Ku Xidhiidhiyay Suldaan Maxamed Cabdi Qaadir In Uu Faraha Kula Jiro Hawlo Soomaali Weyn Loogu Ololaynayo
Xogo Ku Xidhiidhiyay Suldaan Maxamed Cabdi Qaadir In Uu Faraha Kula Jiro Hawlo Soomaali Weyn Loogu Ololaynayo
Muqdisho (Foore)- Barnaamij Habeen hore Saqdii Dhexe ka baxday Telefishanka wadanka Soomaaliya ee SLTV ayaa lagu qaadaa dhigay Barnaamij lagu muuneeyey Dib U Bilaabidda Midnimo Soomaaliyeed iyo Sidii Shacabka Somaliland loogu Jihayn lahaa in ay ka tanaasulaan Mabda’ Gooni isu taagga. Barnaamijkan ayaa daaha ka rogay dadaalo dhinacyo badan ka socda oo ay ku jiraan dad arrintan loo xil saaray iyo Xukuumadda Muqdisho. Barnaamijkan waxa kale oo lagu sheegay In Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo ka mid ah salaadiinte reer Hargeysi ugu horreeyo dad Somaliland Miisaan ku leh oo Arrintan loola yimdi oo si weyn u soo dhaweeyey kuna shaqaynaya wakhtigan.
Barnaamijka Telefishanka ka baxday waxa ka qayb galay Safiirka wadanka Soomaaliya u fadhiya Ingiriiska, xildhibaano ka tirsan maamulka Muqdisho iyo dadweyne kale, iyada oo Barnaamijkan Gundhig looga dhigay Dood nuxurkeedu ahaa sidii Xukuumadda Soomaaliya u hir gelin lahayd wax ay ku sheegeen Midnimo Soomaali weyn. Mid ka mid ah dadkii Barnaamijkaasi ka qayb galayay ayaa sheegay in ay Guddi loo saaray arrintani dhambaallo baaqyo ah u soo direen shacabka Somaliland ee gudaha ku nool oo ay kala soo xidhiidheen ugu yaraan Konton Kun oo qof. Ninkan Telefishanka ka hadlayay waxa uu xusay In Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir la soo xidhiidhay oo uu u sheegay in uu diyaar u yahay in uu shacabkiisa ka Suldaan ahaan ku soo hogaamiyo Midnimo Soomaali weyn oo dib u dhalata. Si cadna uu arrintaasi uga shaqayn doono shacabkuna gaadheen marxalad ay arrintan si weyn u qaadan doonaan.
Dhawaan ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in Suldaan Maxamed Cabdiqaadir oo ka mid ah Salaadiinta reer Somaliland ku tiraabay hadalo u janjeedha Soomaali weyn. Dhinaca kale Safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Ingiriiska oo Barnaamijkan ka qayb galayay ayaa sheegay in Xukuumaddiisu waddo qorshe ku jihaysan Shacabka reer Somaliland oo ay kaga dhaadhicinayaan in dib loo Bilaabo Midnimo iyada oo aan laga tagayn in Madaxda Somaliland arrintaasi lagala shaqeeyo.
“Shirkii London ka dhacay February 2012 waxa uu noqday mid tallaabo hore loogu qaaday Midnimo Soomaaliyeed oo dib loo gaadho. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in Xukuumaddii dambe ee Soomaaliya u dhalataa ay halkaasi ka sii amba qaaddo. Xukuumadda maanta talada haysa Soomaaliya waxa ay dadaal weyn ugu jiraan sidii Somaliland loo keeni lahaa. Dadaaladaasi waa ay bilaabmeen waxaana ka mid ah mid dhinaca shacabka khuseeya. Waad aragtaan in Ganacsigii isku furmay, Shacab badan oo reer Woqooyi ahi ku sii qulqulayaan Muqdisho iyo Hilaw badan oo aanu dareemayno. Taasi waxa ay nagu khasbaysaa in aanu raadino Midnimo Soomaaliyeed” Sidaa waxa yidhi Safiirka Soomaaliya u jooga wadanka Ingiriiska Cabdirashiid Aadan Seed oo Barnaamijkan qayb ka ahaa.
Barnaamijka Telefishanka Xukuumadda Soomaaliya ka baxay Habeen hore Saqdii Dhexe ayaa ahaa mid naxli badani ku jiro iyada oo dadka Barnaamijkaasi ka soo qayb galay si weyn xukuumadda Muqdisho ugu boorriyeen in Shacabka la abbaaro maadaama xukuumadihii kala dambeeyey ee Somaliland soo maray ahaayeen kuwo shacabka ka hor taagan midnimo ay doonayaan. Arrintan ayaa ah mid muujinaysa Riyada wali ka jirta Soomaaliya. Aan is waydiinee maxaa maanta la gudboon shacabka Somaliland ee mar kale loogu soo tukubayo Ulo Booc ah?.
Previous PostShirkii Golaha Dhexe Ee Kulmiye Oo Ku Qabsoomay Hargeysa Iyo Qodobada Ka Soo Baxay Iyo Nuxurka Khudbaddii Madaxweyne Siilaanyo Next Post Shirkadihii Hawlaha Baadhista Shidaalka Ka Waday Somaliland Oo Natiijo Farxad Leh Soo Bandhigay Iyo Deegaamada Laga Helay Shidaalka